Hydra-Centaurus Supercluster - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 12h 48m 49.3s, −41° 18′ 40″
12° 48′ 49.3″
~၅၄ Mpc (၁၇၆ Mly)
Hydra-Centaurus Supercluster (SCl 128) သည် supercluster ဖြစ်ပြီး အပိုင်း ၂ ခုရှိသည်။ ယင်းသည် Virgo Superclusterနှင့် အနီးဆုံး အိမ်နီးချင်းဖြစ်သည်။
စင်တောရပ်အပိုင်းတွင် ကြီးမားသော ဂယ်လက်ဆီ cluster ၄ ခုပါဝင်ပြီး ယင်းတို့မှာ
Abell 3526 (Centaurus Cluster),
Hydra Cluster (A1060) နှင့်
Norma Cluster (A3627) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ယင်းတို့သည် ဗဟိုကျသော cluster များ၏ ဝေးရာမှ အလင်းနှစ် ၁၅၀ မီလီယံမှ ၂၀၀ မီလီယံ ကွာဝေးပြီး သေးငယ်သော cluster များသည် အုပ်စုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဤ supercluster နယ်နမိတ်အတွင်း Great Attractor တည်ရှိပြီး ယင်းသည် Norma Cluster (Abell 3627) ဖြင့် အုပ်စိုးထားသည်။ ဤကဲ့သို့ များပြားလှသော ဂယ်လက်ဆီ cluster များသည် ဒြပ်ဆွဲငင်အား သက်ရောက်သဖြင့် Norma Cluster ဆီသို့ ၅၀ Mpc အထိ တစ်စက္ကန့်လျင် ၆၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် bulk flow ကို ဖြစ်စေသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Centaurus Supercluster (Hydra-Centaurus) သည် ကြီးမားသော supercluster Laniakea ၏ အစိတ်အပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ယင်း Laniakea သည် Great Attractor ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်း supercluster တွင် Virgo Supercluster တည်ရှိသောကြောင့် ကမ္ဘာမြေတည်ရှိရာ နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီလည်း တည်ရှိနိုင်သည်။
↑ "Evidence for large-scale structure on scales about 300/h MPC" (March 1, 1991). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 249 (March 1, 1991): 46–61. doi:10.1093/mnras/249.1.46. Bibcode: 1991MNRAS.249...46P.
↑ "The Laniakea supercluster of galaxies" (2 September 2014). Nature 513. doi:10.1038/nature13674. Bibcode: 2014Natur.513...71T.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydra-Centaurus_Supercluster&oldid=340782" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၁:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။